10 Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe
Europe na-echetara anyị mgbe niile banyere Hollywood ochie na ndị eze. N'ihi ya, nkwụsịtụ obodo n'otu n'ime obodo ndị dị ịtụnanya na Europe bụ ihe ndị mara mma na ndụ. Ezigbo iri nri, omenala, na akụkọ ihe mere eme ya na ụzọ pụrụ iche na ije na-ewepu ume anyị, bụ ihe ole na ole n'ime ihe ndị na-eme ka Europe bụrụ nrọ.
Site n'ụsọ osimiri nke Nice ruo na mbara igwe dị na Vienna, anyị 10 nkwụsịtụ obodo kacha mma na Europe ga-akacha atụmanya gị.
Njem ụgbọ oloko bụ Ezọ nke Enyi-Enyi na Enyi Ife na Europe. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Vienna, Austria
Ọ bụrụ naanị maka Sachertorte, mẹ ẹjo iphe-ẹhuka, ikwesiri ilebara Vienna anya maka ezumike obodo gi na Europe. N'etiti izu ma ọ bụ ogologo izu ụka, Vienna na-enye ọtụtụ ebe nlegharị anya iji nwee mmasị na echiche nke obodo ahụ ga-ewepụ ume gị.
Bido na Kahlenberg site na ebe ị nwere ike ịhụ ụzọ niile wee ruo Carpathians nke Slovakia. Gaanụ gaa n'agwaetiti a na-eme n'okirikiri nke Danube maka eserese na gbadaa Vienna gaa Franziskanerplatz square ị drinkụ kọfị Viennese na akwukwo ozi. Mechie ụbọchị ahụ na cocktails na Das Loft sky bar ma soro ndị obodo mekọọ ọnụ.
Ndị a bụ ole na ole n'ime ihe pụrụ iche ị ga-eme na Vienna ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji oge ezumike obodo gị na Vienna dị ka ezigbo Viennese.
Traz si na Vienna site na Ọzụzụ
Dị n'etiti Switzerland na Germany, dị nso na mpaghara Rhine mara mma na France, Colmar bụ obodo mara mma ma maa mma. Ọ bụ nke a mere ntakịrị obodo a ji bụrụ otu n’ime obodo kacha mma na-emebi njem na Europe. Ekele ya obere ya na nke bara ụba 1000 Akụkọ ihe mere eme nke Europe na-agbakwunye na ọnọdụ anwansi, you ga-ahụ n'anya n ’anya mbụ wee laghachi n’ ogologo ọnụnọ.
Ozugbo ị bịarutere na Colmar ị ga - enwe mmetụta ozugbo ị banye n ’akwụkwọ akụkọ ụmụaka. Thezọ zuru oke iji nọrọ ezumike obodo gị na Europe na-awagharị n'okporo ụzọ ruo obere Venice, kwusi maka a iko mmanya, na ọpụrụiche Alsace.
Colmar zuru oke maka ezumike obodo Krismas ma mara mma nke ukwuu maka izu ụka mmiri.
Paris ruo Colmar site na Ọzụzụ
Zurich na Colmar nke Ọzụzụ
Stuttgart na Colmar site na Ọzụzụ
Luxembourg na Colmar site na Ọzụzụ
3. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Venice, Italy
Ridzọ, unusuallọ ndị pụrụ iche ma mara mma, isi pizza na Aperol, mee Venice a ebe nro maka ezumike obodo na Europe. Obere ya, ngosi ihe mgbe ochie, ebe nlegharị anya ga - eme ka ị ghara ịna - arụ ọrụ ruo ngwụcha izu na nkenke. A na-enwe obere piazza mgbe niile n'akụkụ ebe a na-eme ihe, ebe inwere ike nodu ala, nwee cappuccino na panini, ma ọ bụ mesoo onwe gị bred na-atọ ụtọ na stovu oge ochie.
Ọ bụrụ n’ị na-eme mkpọtụ maka ngwụcha izu, agwaetiti ndị mara mma nke Burano na Murano bụ njem ụgbọ mmiri na-aga.
Milan na ụgbọ okporo ígwè gaa Venice
Padua ji ụgbọ oloko gaa Venice
Bologna na Venice site na ụgbọ oloko
Rome na ụgbọ okporo ígwè gaa Venice
4. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Nice, France
Enweghị ihe izu ike karịa njem ọsọ ọsọ na Riviera French na ngwụsị izu. Ọmarịcha Nice na ụsọ mmiri ya bụ nnukwu ebe maka ezumike obodo ncheta oge ezumike na Europe.
Cote D'Azur bụ ọnọdụ nke osimiri kachasị mma na Nice na La Tour Bellanda agaghị eche maka ndị na-achọ akwụkwọ ozi ahụ. nlele na ọdịda anyanwụ. Ezumike obodo na Nice bụ ihe niile gbasara obibi obibi na iri nri dị mma. Ya mere, izu ụka na Nice ga - eme ka ọ dị gị ka ị bụ eze.
Neszọ ụgbọ ologo na-aga Paris site na Train
Cannes na Lyon site na Ọzụzụ
Ihe mbu n’abia n’uche mgbe mmadu n’eche banyere nhapu obodo n’obodo Amsterdam bu district light, biking, na ọwa mmiri. ma, obere obodo Europe a nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
N'oge ọkọchị Amsterdam na-agba agba na agba ndị dị mma na ebe ọ bụla ị na-atụgharị dị ka mpempe akwụkwọ ozi. Ọwa mmiri, ụgbọ mmiri, anyịnya igwe, na okooko osisi na-echere ime ka ị nweta foto foto gị. Bido na ebe ngosi ihe mgbe ochie Tulip wee banye Jordaan, a ọtụtụ nke cafes na obere obodo boutiques, ma ọ bụ Oost na Rembrandt ogige maka a ogu na ezumike.
6. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Cinque Terre, Italy
Cinque Terre nwa otu 5 yi agba na ime obodo na ọ ga-abụrịrị otu n'ime obodo kachasị mma ị ga-ewere na ndụ gị. N'oge mgbụsị akwụkwọ na oyi, Cinque Terre bụ ihe mara mma ihi ụra, mana n’oge ọkọchị ọ na-aga n’ihu dịka obodo Europe ọ bụla. Nke kasịnụ uru Cinque Terre ma e jiri ya tụnyere obodo ndị Europe bụ na ị ga - enwe ike ịga njem nleta na nleta 5 obodo na erughi 3 ụbọchị. Ya mere, njem ụgbọ oloko na Cinque Terre dị mfe ma nwee ntụsara ahụ nke ị nwere ike ịga obodo nta karịa 20 nkeji.
Ọdabere n’elu ugwu na kpuchie osimiri ahụ nwere ọmarịcha osimiri, Cinque Terre bụ ihe na-eju anya. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ cafes, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, echiche, na hiking ụzọ ụkwụ iji kwado ụtọ ọ bụla. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji zuru ike na otu iko mmanya ke ubi-vine nke obodo ma ọ bụ nweta adventurous, mgbe ahụ ezumike obodo na Cinque Terre dị mma maka gị.
La Spezia si Manarola jiri ụgbọ okporo ígwè
Riomaggiore na ụgbọ okporo ígwè na Manarola
Sarzana si Manarola jiri ụgbọ okporo ígwè
Levanto si Manarola jiri ụgbọ okporo ígwè
Ubi Beer, ogige ntụrụndụ, echiche na-akpali akpali, na-emekwa ka ha na-awagharị, mee Prague bụ obodo zuru oke na Europe. Prague bụ ebe obibi dị egwu, akụkọ ihe mere eme, obodo n’ahịa, na cafes ebe ị nwere ike jide kọfị na achịcha nri ka ị gaa nwee ntụ na otu n'ime ọtụtụ ogige ya. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ebe zoro ezo na ebe ihe nkiri dị ichiiche ma zere ìgwè ndị njem.
Prague bụ ebe amaala ezumike obodo na Europe, n’agbanyeghi na o nwere ike buru mmadu juo n’afọ niile. ma, ọ ka bara uru nleta maka obere izu ụka. Ozugbo ịpụsịrị ụgbọ oloko ahụ, ị ga-ahụ n'anya na ịma mma a ọmarịcha obodo.
8. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Brussels, Belgium
Ọ bụrụ n ’ị nwere ezé dị ụtọ, will gha enwe ezumike ezumike obodo dị egwu na Brussels. Brussels nwere ọtụtụ ihe ịkekọrịta ma gosi gị ya, dika ihe omuma chọkọleti a ma ama n’ụwa na waffles. Na mgbakwunye, karịrị 100 ngosi ihe mgbe ochie na-eche gị na Brussels. Mgbe ịgachara ndị kachasị mma ị nwere ike ịga rue rue Danseart maka ụta ị ga-eri n'ụlọ nri kachasị mma. Ọzọ bara nnukwu uru na Brussels bụ maa mma Ebe Sainte-Catherine na na na na omenala Chatelain.
Obi ga-atọ Brussels ụtọ ịnabata gị maka obere izu ụka dị mkpirikpi ma ọ bụ ogologo. Ọ bụ obodo na-ekwo ekwo nwere amara na ụdị nke onye ọ bụla nọ n’ọgbọ ọ bụla nwere ike ịkọwa ya.
Luxembourg na Brussels site na Ọzụzụ
Werlọ ụgbọ oloko na Antwerp gaa Brussels
Amsterdam ka Brussels site Ọzịza
Paris ka Brussels site Zụọnụ
Obodo nke abụọ kachasị na Germany bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka ezumike obodo na Europe. Hamburg bụ ụlọ ọdụ ụgbọ mmiri nke obodo kachasị ukwuu na ọdọ mmiri Inner na Outer Alster, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ a njem ụgbọ mmiri dị egwu.
Planten un Blomen bụ ubi botanic nke nwere nnukwu echiche na ebe maka foto. Ya mere, ị ga - aka igwefoto igwefoto gị nke ọma wee jikere maka ọmarịcha foto iji soro gị ezumike gị dị ịtụnanya na Hamburg.
Train din Hamburg na Copenhagen
Zurich na Hamburg site na Ọzụzụ
Rotterdam ka Hamburg site na Ọzụzụ
10. Obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe: Budapest, Hungary
Otu n’ime ihe kachasị mma ị ga-eme na Budapest bụ iwere ụgbọ mmiri gbadaru n’osimiri Danube. Bestzọ kasị mma na-enwe mmasị na obodo na ije na Budapest bụ ụgbọ mmiri. Ya na nnukwu ihe eji eme ya, isi obodo Hungaria bu ihe di elu na elu anyi 10 obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe.
Inyocha àkwà mmiri, gaa na mmiri ịsa ahụ ọdịnala, Ma detụ ire nri ndị Hungary bụ ihe ị ga-eme ka obi dị ka mpaghara n’obodo Budapest. Ọzọkwa, Gha mbọ hụ na ị gara Matthias Church, Fisherman ji mkpụ ya, na Parliamentlọ Ome Iwu maka ọdịda anyanwụ maka obodo.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ ka ọ bụla nke mara mma ebe obodo oge izu ị na-eme atụmatụ iji!
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “10 Best City Breaks na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)